स्नैपड्रैगन 855: क्वालकॉमको पहिलो 7nm प्रोसेसर 5G | Androidsis
नोभेम्बर को अन्तमा खबर आयो, यो अपेक्षित छ क्वालकम प्रस्तुत गर्न बाहिर डिसेम्बर on मा आधिकारिक रूपमा उच्च-अन्तको लागि यसको नयाँ प्रोसेसर। अन्तत: दिन आयो र यो भएको छ। दिनभर धेरै लीक पछि, रातमा यो आधिकारिक रूपमा स्नैपड्रैगन 855 XNUMX प्रस्तुत गरिएको थियो। यो ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त प्रोसेसर हो, जसले २०१ market मा एन्ड्रोइडमा यो बजार क्षेत्र हावी गर्नेछ।
स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX यसको पूर्ववर्ती भन्दा धेरै महत्वपूर्ण सुधार ल्याउनको लागि बाहिर खडा छ। क्वालकॉमले हामीलाई एक शक्तिशाली प्रोसेसरको साथ छोडिन्छ, कृत्रिम बुद्धिमताको ठूलो उपस्थिति र मेशिन शिक्षा र यो यो हरेक तरिकामा यसको प्रतिस्पर्धीहरु बाहिर पार्ने कोशिस गर्दछ। बुझ्दछ?
पूर्ण रूपमा पालना गर्दछ, किनकि क्वालकॉमबाट आएको यो नयाँ चिपले पहिले नै राम्रो प्रभावहरूको साथ छोडिन्छ र बढेको देखिन्छ Exynos 9820 y Kirin 980 जब यो प्रदर्शन गर्न आउँछ। त्यसैले अर्को वर्षको उच्च-एन्ड्रोइडमा धेरै सम्भावनाहरूको साथ एक शक्तिशाली प्रोसेसर हुने छ।
स्न्यापड्रैगन 855 7: n एनएममा र एआई सुधार सहित बनाइएको
यो पहिले नै अघिल्लो अवसरहरुमा चुहावट भइसकेको थियो, र यो अन्ततः आफ्नो प्रस्तुति मा प्रकट भएको छ, स्न्यापड्रैगन 8557पहिलो प्रोसेसर हो जुन क्वालकमले n एनएममा निर्माण गर्दछ। हामी एक प्रोसेसरको सामना गरिरहेका छौं जुन कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लागि टास्क व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। यस अर्थमा कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी एल्गोरिदमको परिचयलाई धन्यवाद, ट्रिपल पावरलाई आश्वासन दिइएको छ। अपेक्षित रूपमा, यी यी कृत्रिम खुफिया कार्यहरू प्रबन्ध गर्नका लागि NPU एकाई छ।
यो बजार मा एक प्रवृत्ति हो, जुन संग तिनीहरू उत्तम क्यामेरा प्राप्त गर्न चाहन्छन्, हार्डवेयरको भन्दा सफ्टवेयरको लागि अधिक महत्त्वको साथ। यसको मतलब यो छ कि एल्गोरिदमहरू जुनसँग फोटोग्राफीको अतिरिक्त मोडहरू प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिएको छ। उदाहरण को लागी, पिक्सेलमा पोर्ट्रेट मोडसँग यस प्रकारको एल्गोरिथ्म छ, जसले जटिल दृश्यहरू समाधान गर्न अनुमति दिन्छ।
ग्राफिक्स को पक्ष मा, स्नापड्रैगन 855 XNUMX पनि बाहिर खडा भयो, आश्‍चर्यजनक। क्वालकॉम GPU मा सुविधाहरू जुन उनीहरूलाई एलिट गेमि call भन्छन्, जुन खेलमा केन्द्रित छ। यो गर्नका लागि, GPU टर्बोलाई सम्झाउन सक्ने सुधारहरू Huawei फोनमा शुरू गरियो। यद्यपि यस समयमा ब्रान्डले यी सुविधाहरूको बारेमा विवरण दिएको छैन। यस अवस्थामा, प्रोसेसर एक Adreno 640 GPU को उपयोग गर्दछ, जुन खेल को लागि आदर्श हो।
अर्को पक्ष जसमा यो प्रोसेसर बाहिर छ परिचयको हो स्क्रिन अन्तर्गत अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट रिडरको लागि समर्थन गर्दछ। एक विशेषता जुन हामीले अधिक दायरामा उच्च दायरामा फेला पार्दछौं। यस तरिकाले, उनीहरूसँग २०१० मा यो समर्थन हुनेछ, एक वर्षमा हामी आशा गर्दछौं कि हामी यस सुविधालाई एन्ड्रोइडमा उच्च-एंड फोनहरूमा ठूलो आवृत्तिको साथ देख्दछौं। यस समर्थनका लागि धन्यवाद, यस्तो हुन सक्छ कि हामी यो सुविधा अधिक पटक देख्न सक्दछौं।
जडानमा महत्वपूर्ण समाचारहरू पनि छन्। किनभने स्नैपड्रैगन 855 50 एक XXNUMX मोडेम पहिलो हो, धन्यवाद समर्थन गर्दछ / प्रयोगकर्तालाई G जी जडानहरू अनुमति दिन्छ। यस तरीकाबाट, प्रोसेसर बजारमा पहिलो 5G समर्थन प्रस्ताव गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि5जी समर्थनका साथ फोनहरू आउँदो वर्षको पहिलो आधामा आउने आशा गरिन्छ, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि तिनीहरू मध्ये धेरैले यो प्रोसेसर प्रयोग गर्दछन्।
ब्याट्री खपतको बारेमा केहि उल्लेख गरिएको छैन प्रस्तुतिकरणमा। यद्यपि n एनएममा निर्मित नयाँ प्रोसेसरहरू सामान्यतया कम ब्याट्री खपतको साथ आउँछन्। त्यसो भए यसले उच्च-अन्तको एन्ड्रोइड मोडलको साथ प्रयोगकर्ताहरूलाई बढी सक्षम प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। कुनै श doubt्का बिना, खातामा लिनको लागि एक लाभ।
स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX को उत्पादन धेरै चाँडै सुरु हुने आशा गरिएको छ। सम्भवतः MWC 2019 मा हामी पहिलो फोनहरू भेट्छौं बजार को कि यो नयाँ क्वालकॉम प्रोसेसर को उपयोग गर्न को लागी। तपाईं प्रोसेसरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX अब आधिकारिक हो: उच्च-अन्त्यका लागि नयाँ प्रोसेसर